Cunto: Ma joojin karnaa makiinadaha raadinta laga soo bilaabo indexing specific pages ee WordPress?
Haddii aad sameysatay website cusub, waxaa habboon in la xakameeyo mashiinno raadin laga bilaabo guurguuridda iyo muujinta goobtaada ilaa ay si buuxda u diyaarsan tahay.
hoos u dhig talooyinka ay soo saartay Ross Barber, khabiir takhasus leh oo ka socda Semt , haddii aad ka wareersan tahay sidii loo joojin lahaa makiinadaha raadinta laga soocayo boggaaga.
Xakamaynta mashiinka raadinta waxay kuugu gurtaan boggaaga si ay u xajiyaan boggooda mawduuca. Inta badan websaydhku waxay ku faraxsan yihiin inay ogaadaan in makiinadaha raadinta raadinta iyo raadinta boggooda, laakiin waxaa jira waqtiyo marka bogagga shabakadaada aan si habboon loo xisaabin.
Nasiib darro, ma jirto wax doorasho ah oo WordPress ah oo kuu oggolaanaya in aad joojiso boggagaaga in lagu daboolay - oakley feminino espelhado. Xulashada kaliya ee aad leedahay waa inaad u oggolaato makiinadaha raadinta raadinta wax kasta, iyo wax aan ka hadhin. Joojinta Google, Bing, iyo Yahoo in laga dhejiyo boggaaga waa lagama maarmaan haddii aysan si buuxda u diyaarsanayn.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay blog ah oo bogag yar oo kooban aysan laheyn, waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan in la joojiyo makiinadaha raadinta oo laga soocayo boggaaga illaa bogagga ay diyaar yihiin. Qeybo kala duwan iyo shabakadaha ma xakameyn karo makiinadaha raadinta si ay ugu dhejiyaan bogagga la soo dhigi karo.
Taas macnaheedu waa in dad badani ay soo dejisan karaan eBooks, faylasha digital, iyo warbaahinta kale xitaa marka goobta aysan diyaar u ahayn in la daabaco. Waxay ka soo qaadan karaan waxoogaa bogag gaar ah iyagoo samaynaya baaritaan degdeg ah onlineka. Haddii aad rabto inaad joojiso matoorada raadinta adigoo ku dhajinaya boggaga iyo boostada, waa inaad xasuusnaataa hababka soo socda.
Ku dar Robots Meta Tags ee Header
Waa suurtogal in la xakameeyo bogag dhowr ah oo ka timid natiijooyinka raadinta raadinta adoo isticmaalaya astaanta WordPress shuruudaha..Si aad u hesho natiijooyinka la rabo, waa inaad isticmaashaa astaanta shuruudaha saxda ah. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad xirto hal boostada, markaa tag (is_single) ayaa loo isticmaalaa, iyo haddii aad rabto inaad ka hortagto bog, ka dibna (is_page) waxaa loo isticmaalaa boggaas WordPress. Waa muhiim inaad ku darto nambarka qaybta madaxa ee mawduucaaga header.php. Waxaad isticmaali kartaa boggag kala duwan oo shuruudaha shuruudaha ah, marka loo baahdo.
Waxaa jira seddex siyaabood oo lagu daro sumadaha meta si aad u bedesho template header.php. Qeybta ugu fiican waa in natiijada dhammaan hababkaasi isku mid yihiin, laakiin waxaad dooran kartaa habka aad u aragto inuu ka fudud yahay kuwa kale. Si aad u joojiso bog gaara ama boosteejo, waa inaad haysataa aqoonsigeeda oo aad saxdaa. Markaad doorato aqoonsi ee boostada ama bogga, waxaad awoodi doontaa inaad joojiso makiinadaha raadinta ka soo jeeda. Waxaad ku dhejin kartaa shabakadda YouTube-ka ee cinwaanka cinwaanka. Habka labaad waa adigoo ku daraya koodh gaar ah qaybta madaxa ee mawduuca header.php mawduuca. Koodhani waxa uu tusinayaa aqoonsiga boostada ee aad rabto in aad joojiso. Waxaad xakameyn kartaa bogag badan sida aad rabto isticmaal farsamadan. Habka seddexaad iyo kan ugu dambeeya ayaa si sax ah u habeeya. In la xakameeyo tirada saxda ah ee bogagga iyo boostooyinka waa muhiim. Haddii aad ku dartey koodhka si sax ah, waxaad arki kartaa qaybta qaybta ee bogga
Ka faa'iideysiga xulashada khadka WordPress ee gaarka ah
Habka seddexaad iyo tan aan caadi ahayni wuxuu ka faa'iideysanaya xulashada WordPress khaas ah. Habkani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican uguna wanaagsan. Ugu horreyntii, waa inaad ku dartaa nambar gaar ah qaybta madaxa ee cinwaanka header.php. Marka koodkan la geliyo, ma bedeli kartid illaa goobta uu diyaar u yahay inuu si buuxda u dhajiyo.
Waxaan dareensanahay in farsamooyinka kore ay yihiin kuwo sahlan oo si sahlan loogu rakibo macaamiishaada. Haddii aad isticmaasho mid ka mid ah hababkan si aad u xakamayso tiro badan oo bogag iyo boosto ah si aad uhesho, waa inaad sameysaa faylasha kaydka ee bogaggaas oo aad fiiriso kuwa aad rabto in aad joojiso.